အာလူး ပူတီ၊ ချာပတီ | Wutyee Food House
« ကြက်သားအကြွပ်ကြော် အချိုဟင်း
အာလူး ပူတီ၊ ချာပတီ
December 4, 2011 by chowutyee
၁။ ကြက်ပေါင် – ၂ခု (တ၀က်ပိုင်းပေးပြီ ဆား၊ ကြက်သားမှုန့်တို့ဖြင့် နုယ်ထားပေးပါ) (Optional)
၂။ အာလူး – ၇ လုံး (အတုံးသေးများ တုံးပါ)
၃။ ကြက်သွန်နီ – ၁လုံး (နှုတ်နှုတ်ဆင်း)
၅။ ကလဝေရွက် -၂ ရွက်
၆။ သစ်ဂျပိုး – ၂ခု
၇။ ငရုတ်သီးမှုန့် – စားပွဲတင်ဇွန်း တ၀က်
၈။ ဆနွင်းမှုန့် – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၃ပုံ၁ပုံ
၉။ မုန့်ညှင်းစေ့ (လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ ဇွန်း)
၁၀။ ဇီယာ (လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း)
၁၁။ ဆား၊ ကြက်သားမှုန့်
၁။ ဒယ်ထဲ ဆီထည့်ပါ၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ နီကို အညှိရောင်သန်းလာသည်အထိ ဆီထိုးပါ။
၂၊ ပြီးလျှင် ငရုတ်သီးမှုန့်၊ ဆနွင်းမှုန့် ထည့်ပြီ မွှေပေးပါ။ ထို့နောက် ကြက်သားများကို ဒယ်ထဲ ထည့်ကာ ရောမွှေပေးပါ။
၃။ ပြီနောက် အားလူး၊ မုန့်ညှင်းစေ့၊ ဇီယာ၊ ကလဝေရွက်၊ သစ်ဂျပိုး ထည့်ပါ။
၄။ အရသာအတွက် ဆား(လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၃ဇွန်း)၊ ကြက်သားမှုန့်(လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ဇွန်း) ထည့်ပါ။
ပူတီ၊ ချာပတီ အတွက် ပါဝင်သောပစ္စည်းများ
၁။ ဂျုံ – ၁၅၀ ဂရမ်
၂။ ဆား – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း
ပူတီ၊ ချာပတီ လုပ်နည်း
၁။ ဂျုံ၊ ဆား၊ ရေ ကိုသမအောင်ရောနုယ်ပေးပါ။ ဂျုံဒိုးကို ပျော့သွားလျှင် ဂျုံထပ်ထည့်ပေးပါ။
၂။ ပြီးလျှင် နုယ်ထားသော ဂျုံဒိုးကို ဆီအနည်းငယ် ထည့်ကာ ၁လက်မအရွယ် အလုံးလေးများလုံးပေးပါ။
၃။ ထို့နောက် ဂျုံလုံးလေးများကို ထလိမ့်တုံးဖြစ် အပြားဖြစ်အောင် လုပ်ပေးပါ။ တလိမ့်တုံးတွင် ဂျုံများမကပ်အောင် လိမ့်လျှင် ဂျုံပြားပေါ် ဂျုံမှုန့်များ ဖြူးပေးပါ။
၄။ ဒယ်ထဲတွင် ဆီနည်းနည်းထည့်ကာ ဂျုံပြားများကို ထည့်ကြော်ပေးပါ။ ချာပတီများကို အသင့်စားနိုင်ပါသည်။
မှတ်ချက်။ ။ ဆီများများနှင့် ဂျုံပြားကို ကြော်ပါက ပူတီိကို ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။
၅။ အရသာ ထူးကဲပြီး အိန္ဒိယအနံသင်းစေသည့် အာလူး ပူတီ၊ ချာပတီကို သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။
Posted in အိန္ဒိယ ဟင်းလျာချက်ပြုတ်နည်း | 12 Comments
on December 16, 2009 at 10:37 am | Reply Hmone Gyi
i can get smell from here heee…so clever my twin…will try soon 😉
on December 16, 2009 at 10:49 am | Reply chowutyee
Next time, when u came back Yangon, I will cook for you… haaaaaa Anyway u can buy indian spices from Indian shop..
on January 2, 2010 at 8:09 am | Reply အောင်လင်းနိုင်
ဟဲ့ငရည်မ စာလုံးပေါင်းတွေ မှန်အောင်ပေါင်းစမ်း ၊အစားတွေကတော့စားချင်စရာတွေချည်းပဲ
on January 2, 2010 at 8:58 am | Reply chowutyee
အောင်အောင်ကလည်း မြန်မာစာလုံးပေါင်းက မနည်းကြိုးစားရေးထားရတာ၊ ဟဲဟဲ… အစားတွေလုပ်စားကြည့် လွယ်ပါတယ်။
on December 14, 2011 at 10:52 am | Reply ခိုင်ဇင်
အစ်မ ပူရီလုပ်တာ၊ မုန့် ကဖောင်းမလာပဲ အချပ်လိုက် အကြွပ်ကြော် ဖြစ်သွားတယ်။ အစ်မက All purpose flour သုံးလိုက်တာ။ အဲဒါသုံးလို့ ရလားဟင်။ ပြီးတော့ ဆော်ဒါ ထည့်ဖို့ လိုလားညီမ။ မုန့် နယ်ထားပြီးရင်ရော ဘယ်လောက်ကြာကြာနှပ်ထားရမလဲ။ ဂျုံကိုပြားတဲ့အခါ အစ်မက အရမ်းပါးအောင် ပြားလိုက်တယ်။ ခပ်ထူထူပဲ ပြားရတာလားဟင်။ ညီမလို ကောင်းကောင်းလေး လုပ်စားကြည့်ချင်လို့ ပါနော် 🙂
on December 15, 2011 at 5:30 am | Reply chowutyee
မခိုင်ဇင်ရေ ဂျုံမှုန့်က ရိုးရိုးဂျုံမှုန့်ဆိုရပြီ။ ၀တ်ရည်ကတော့ ဒုံးပျံတို့၊ မွှေးတံဆိပ် ဂျုံမှုန့်တွေပဲ သုံးတာ များတယ်။ ဆိုဒါ မထည့်ရပါဘူး။ ပူရီ ကြော်တဲ့အခါ ဆီအရမ်းမများလို့ မဖောင်းလာတာပါ။ ပြီတော့ ဆီများရုံမကသေးပဲ ဆီအရမ်းပူလာမှ ထည့်လိုက်မှ ဖောင်းလာတာပါ မ။ ထပ်စမ်းကြည့်ပါအုန်းနော်.. Thanks 😛
on January 5, 2012 at 7:11 am | Reply Htet Sandi
Sis, I used “all purpose flour” and turned out like what you just got when i tried it for the first time. For the second time, I rolled the dough until it became very thin sheet, and it turned out just perfect. May be you should try like I did.
on January 9, 2012 at 12:40 am chowutyee
ok I will.. Thanks
on February 8, 2012 at 6:45 am | Reply fkthet
နည်းနည်းလေးပြောခြင်တယ် မုန့်ကိုဆီအိုးထဲထဲ့တဲ့အခါ မုန့်ချပ်ပေါ် အပြားလေးဇွံန်းနဲ့အသာလေးဖိထား နဲနဲလေးဖောင်းတော့မှ ဆီလေးတွေကို ပက်ပေးပါ
တဖြေးဖြေးဖောင်းလာမယ် မီးပျင်းလို့မရဘူးနော် ဒီက ဗန်းမော်တုံးက ကုလားတွေနဲ့နေခဲ့တာမို့ပါ။ ကုလားပြည်မှာလဲ ကြာတယ်လေ။ ဆီများများနဲ့ကျော်ရင်တော့ အသာလေးသာ အပြားလေးပေါ်က ဖိပေးရင် ပွလာတာဘဲ စပွလာမှ ဆီနဲ့ပက်ပက်ပေးပေါ့
on February 8, 2012 at 2:10 pm | Reply chowutyee
ခုလို နည်းတွေ ပြန်မျှဝေပေးလို့ ကျေးဇူးပါ။ နောက်တခါ ကြော်ရင် ဒီနည်းအတိုင်း စမ်းက်ြည့လိုက်မယ်နော်.. 😛
on April 1, 2012 at 2:36 am | Reply baloo
is ဆနွင်းမှုန့် Turmeric powder ?